The haptic kiiboodu na-enweghị igodo na Apple ka patented | Esi m mac
Anyị chọpụtara ọhụrụ Apple haptic kiiboodu
Ọzọkwa, a na-etinye ụlọ ọrụ Tim Cook na-ebute ụzọ na nkà na ụzụ ọhụrụ mgbe ọrụ nyocha na mmepe dị mkpa. Apple na-ebute ụzọ n'ihe ọhụrụ, Apple natara na Eprel 7 nkwenye nke Office Patent nke oru ngo a: akwukwo kiiboodu na-enweghị igodo maka kọmputa. Ugbu a, anyị maara nkọwa nke teknụzụ nke mejupụtara keyboard a maka laptọọpụ gị.
Ikike nchọpụta aha ya "Nhazi ụdị mmetụta dị ike, na nhazi maka ngwaọrụ eletrọniki" y ga-eweta oge ọhụụ na-arụ ọrụ na ngwa ngwa laptọọpụ oge ọ bụla kọmpat na Mkpa ọkụ.
Igodo na-enweghị igodo teknụzụ haptic
Usersfọdụ ndị ọrụ gosipụtara omume ịjụ ịnakwere ọhụrụ trackpad nke Apple ji ede ihe na Ike Touch, ọ bụ ezie na ọganihu a na-atụghị anya ya ewetawo nnukwu abamuru jiri ya mee ihe na nkasi obi, ịdị irè na arụmọrụ, na-enye ihe kpatara ya ọzọ na atụmatụ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Teknụzụ yiri Force Touch bụ onye e ji mee ihe na mmepe nke keyboard a nke mejupụtara a nwee ihe mmetụta nke ahụ ga-edekọ mmegharị ahụ na mkpịsị aka aka n'elu ya. Na weebụsaịtị nke United States Patent na Trademark Office ị nwere ike nyochaa oru a.
Na-ewepu ogwe aka kpochapụla maka keyboard, ọkpụrụkpụ na ibu ibu nke kọmputa ga-ebelata ka ya kacha nta okwu. Apple patenti ohuru a gha edochi igodo ya na ime ya Ọdịdị LED, ikekwe dika eserese ma obu ntule na mpempe akwukwo.
La ihe osise nke ihe odide Ọ nwere uru dị ukwuu na mgbakwunye na nbelata nha. Amam ga-ebelata ike oriri na ekwe omume nke setịpụrụ mmasị na nhazi nke keyboard dika asusu ahu si di ga - abu ihe itunyere na ijikota ihe Na mba niile.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » Anyị chọpụtara ọhụrụ Apple haptic kiiboodu
Otu esi esonye vidiyo na OS X ma tinye ha na iTunes
Comparison MacBook, WhatsApp na Mac, ARM processors na ọtụtụ ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac